Mozean’ny Dinôzôro Voalohany Ao Japana, Ao Amin’ny Prefektioran’i Fukui · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2016 17:18 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, বাংলা, русский, Español, Français, English
Dian'ny kitron-tsoavaly natao sisa-natolo, Mozean'ny Dinôzôro ao amin'ny Prefektiora Fukui. Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Fukui, prefektioran'i Japana tsy fantatry ny mpizaha-tany iraisampirenena indrindra, ahitana ny iray amin'ireo mozean'ny dinôzôro mahatalanjona indrindra ao Japana, mba tsy ilazana hoe manerantany.
Amin'ireo angona karazana dinôzôro 40, mampiraty ireo karazany goavana maro izay mahatonga ny tsanganana Twitter sy Instagram ho mahavalalanina izany.
Tonga ato amin'ny Mozean'ny dinôzôro ato amin'ny prefektioran'i Fukui izahay
Naorina teo akaikin'ny tendrombohitra ny Mozean'ny dinôzôro ao amin'ny prefektioran'i Fukui ary natao mitovy amin'ny atodin'ny dinôzôro ny endriny. Mampiseho fampiratiana dinôzôro sy hetsika nomena lohahevitra dinôzôro ny tendrombohitra manontolo.
Mozean'ny dinôzôro ao amin'ny Prefektioran'i Fukui, ao Katsuyama, Fukui. Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Nosokafana tao Katsuyama, tanàna ambanivohitra tokony ho 600 kilaometatra atsimo-andrefan'i Tokyo tamin'ny taona 2000 ny tranombakoka. Asongadina ao amin'ny Mozea ny fampiratiana zavatra toy ny tena izy misy anjara avy amin'ny Mozea-Mpitondram-Panjaka Tyrrell any Alberta, Canada.
Mitsena ireo mpitsidika ny mozea i Fukuiraptor, dinôzôro joko (mpihinan-kena) teratany avy ao Fukui izay nofariparitana sy nosokajian'i Alan Currie ao amin'ny Mozea Tyrrell amin'ny ampahany.
Hita tao anatin'ny fiforonana ara-jeolojikan'i Kitadani tao avaratr'i Katsuyama ny Fukuiraptor. Iray amin'ireo toerana vitsy ahitana ireo ambina dinôzôro ao Japana ny tendrombohitry ny Prefektioran'i Fukui.
Ankoatra ireo santionany avy eo an-toerana, mampiseho fananganana dinôzôro vaovao feno isan-karazany, anisan'izany ny Tyrannosaurus rex ny Mozean'ny Dinôzôro ao amin'ny Prefektioran'i Fukui.
Tiako ny dinôzôro
Misy ihany koa ireo famoronana dinôzôro vaovao maha-ankona, tahaka ity Allosaurus ity, izay azon'ny mpitsidika jerena akaiky.
Noravahana fampiratiana dinôzôro mifanaraka amin'ny tena izy, tahaka ity Deinonychus manafika Iguanodon ity ny ao tendrombohitra ao ivelany.
Vala midadasika ahitana fampiratiana hafa tsy dia mifanaraka amin'ny tena izy loatra ny tendrombohitra eo ambonin'ny mozea ary nahatonga ireo tsanganana lehibe tao amin'ny media sosialy.
Dika-Olombelona ve aho?
Sarotra ho an'ny mpizahatany ny ahatongavana ao amin'ny Prefektioran'i Fukui, ary mbola miandry ho ampifandraisin'ny tolotra lalamby haingam-pandeha avy ao Tokyo. Andalovan'ny mpizaha tany mankany amin'ny lapa taloha ao an-tanànan'i Kanazawa ao avaratra amin'ny ankapobeny ny prefektiora ambanivohitra sy mahafinaritra. Nanandratra ny tenany ho toy ny toerana tokan'ny dinôzôro ao Japana ny prefektiora mba hisarihana mpizaha tany, ary mandresy lahatra azy ireo mba hihevitra ny hijanona ao Fukui.
Nivadika ho toeran'ny dinôzôro ny toeram-piantsonan'ny fiaran-dalamby ao Fukui:bfg
Dinôzôro ao amin'ny Toeram-piantsonana Fukui. Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Raha te hijery bebe kokoa ny dinôzôro ao Fukui ianao, araho ny tenirohy #福井県立恐竜博物館 ao amin'ny Twitter sy Instagram.